A330 Mega Pack ကို
မေးခွန်း A330 Mega Pack ကို
3 နှစ်ပေါင်း4days ago #232 by Numan28
ဟယ်လို! ငါ A330-300-200 Package ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါပွီ။
ဒါပေမယ့်ငါ့အတူရကီလေကြောင်းလိုင်း A330-300 မ VC ကိုလည်းမရှိ:
3 နှစ်ပေါင်း4days ago #233 by Dariussssss
တ VC ကိုမရှိပါဘူးသောအထုပ်နှစ်ခုဗားရှင်း, တဦးတည်း POSKY အားဖြင့်ဖန်ဆင်းထားသည်ရှိပါတယ်။ သောမတ်စ်ကရုသဖွငျ့နောက်ထပ်တစ် VC ကိုရှိပါတယ်။
အရာအားလုံးမှန်ကန်စွာ installed လျှင်အဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်မှုတွေ, သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးရှိသည်။
3 နှစ်ပေါင်း4days ago #235 by Numan28
သူတို့ထဲကအရာ POSKY ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်နှင့် Thomat ရုသသည်ဗားရှင်းအရာဖြစ်သနည်း
3 နှစ်ပေါင်း4days ago #238 by Dariussssss
သင်လေယာဉ်များကို select ကိုသွားသည့်အခါ3drop-down lists, ဒါမှမဟုတ် menus တွေရှိပါတယ်: လေယာဉ်ကိုထုတ်လုပ်သူထုတ်ဝေသူနှင့်လေယာဉ်ပျံအမျိုးအစား။ ထုတ်ဝေသူပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ, သောမတ်စ်ရုသသည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျသောမတ်စ်ရုသသည်-လူး Quintero တွေ့မြင်လျှင်တူညီသောအရာပါပဲ, မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
3 နှစ်ပေါင်း4days ago #239 by Numan28
အဘယ်သူမျှမ a330-300 သို့မဟုတ် 200 ခရီးသည်ထိုင်ခုံနှင့် VC ကိုအတူရှိပါသလား?
3 နှစ်ပေါင်း4days ago #242 by Dariussssss
ဟမ် .... အကြောင်းမပါသဲလွန်စ, တကယ်ပါ။ ငါကလည်းကဲ့သို့ပင် TR အားဖြင့် A330 VC ကိုနှင့်တကွကြွလာပေမယ့်တကယ့်ကိုသိရပါဘူး, ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ရှိပါဘူး။ ငါကရှာနေမခံခဲ့ရ, ထိုအခန်းအကြောင်းကိုဂရုမစိုက်ပါဘူးကတည်းကငါ installed တစ်ဦးတူညီဗူးရှိပေမယ့်။
3 နှစ်ပေါင်း4days ago #243 by Numan28
သို့သော်သောမတ်စ် Ruth အားဖြင့်အဘယ်သူမျှမ A330-300 လည်းမရှိရှိ posky ဗားရှင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သငျသညျကိုသူတို့ VC ကိုမပါဘဲဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်
3 နှစ်ပေါင်း4days ago #244 by Dariussssss
... လူကိုပါ .....
အိုကေသင်တို့အားရှေ့ဦးစွာဒေါင်းလုပ်လုပ်လေယာဉ် pack ကိုမှငါ့ကို link ကို -give
တတိယအချက်ကြောင့်မှန်ကန်စွာ installed ပါသလဲ
http: //www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/6/799 ဤသူကားငါရှိသည်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်
နှင့်အခုအချိန်မှာ, ငါ့အတွက် FSX ငါထနှင့်အပြေးတစ်ဦး TR A330-300 ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးအချက်အလက်ပေးပါ။
3 နှစ်ပေါင်း3days ago #245 by Gh0stRider203
Dariussssss wrote: အခု, ငါ့အတွက် FSX ငါထနှင့်အပြေးတစ်ဦး TR A330-300 ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးအချက်အလက်ပေးပါ။
သင်တစ်ဦးရန်လိုပစ်မှတ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ကတည်းကကောင်းစွာ ok, ငါသင်တဦးတည်းကမှားပြောင်းရွှေ့စေလျှင်ငါသည်မီးကိုသွားလာရင်း-ရှေ့ဆက်ပေးထားခဲ့ပြီးပြီ ..... တစ်က F-14 ၌သင်တို့၏ခြောက်လ, သင်ပေါ်သို့သော့ခတ် Sidewinder အပေါ်ပေါ့ .....
3 နှစ်ပေါင်း3days ago #246 by Dariussssss
ငါကမှားခဲ့တယျဘယျနညျး ငါတကယ်ကဒီမှာထွက်ကိုကူညီကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးကိုပြု၏။ ငါကလည်းသို့မဟုတ်အမှားတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တယ်လျှင်, ငါကတောင်းပန်သော်လည်း, ငါတကယ်ငါလုပ်ခဲ့တယ်ထင်ကြပါဘူး။